“Garacad 80% waa laga ciribtiray burcadbadeeda, waanu ku hawlanahay inaan sii dhamaystirno inta hartay” Duqa degmada Jariiban – Radio Daljir
“Garacad 80% waa laga ciribtiray burcadbadeeda, waanu ku hawlanahay inaan sii dhamaystirno inta hartay” Duqa degmada Jariiban
Jariiban,Dec,15 -Gudoomiyaha degmada Jariiban ee gobolka Mudug C/kariin Maxamuud Kaytoon ayaa waxaa uu u sheegay Radio Daljir in dadka ku nool gobolka Mudug gaar ahaan tuulada Garacad inay meel fog iska taageen kooxaha burcadbadeeda.
C/kariin Maxamuud Kaytoon ayaa cadeeyay in degmooyinka ay saldhigyada ka dhigteen kooxaha burcadbadeeda ay intii ugu badnayd ka bexeen,inta kalena lagu howlan yahay in laga ciribtiro.
“Waxay hada mareysaa kooxaha burcadbadeeda inay ka bexeen Garacad 80%, 20ka hareyna waxaan ku howlanahay inaan ka takhalusno”ayuu yiri gudoomiyaha degmada jariiban.
Gudoomiyaha degmada Jariiban ayaa u balanqaaday dhalinyarada burcadbadeeda kasoo baxa inay u samaynayaan jihayn iyo shaqo abuurid,lana siin doono qalab ay ku shaqeystaan ayna haystaan balan qaadyo ku filan arintaasi.
C/kariin Maxamuud Kaytoon ayaa waxa uu beeniyay kooxihii burcadbadeeda ee dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Garoowe in laga soo qabtay xeebaha deegaanka Garacad,balse waxaa uu sheegay in laga soo qabatay burcadbadeedaasi oo gaaraya 9-dhlinyaro xeebaha degmada Eyl ee gobolka Nugaal.
Isku soo wada duuboo,dawladda Puntland ayaa waxaa ay wadaa dagaal ka dhan ah kooxaha burcadbadeeda,waxaana dowladdu ay dadka ku nool goobaha fadhiga u ah burcadbadeeda u sameeysay la talin badan oo loogu sheegayo khatarta burcad badeednimada.